Dhalinyarada Aqoonyahanka Ah Ee Magaalada Balli-gubadle Oo Taageeray Is Casilaadii Cabdilaahi Jawaan Fariina U Diray Kulmiye
(Hadhwanaagnews) Friday, April 21, 2017 00:11:33
Hargeysa(HWN):-Dhalinyarada aqoonyahanka beelaha Guulane(Arab) ayaa taageeray is casilaadii taliyihii madaxweynaha somaliland ee arimaha doorashooyinka iyo asxaabta qaranka Cabdilaahi Cabdi Xaaji Cumar(Jawaan).
Dhalinyaradan oo war murtiyeed ay ka soo saareen magaalada Hargeysa soo gaadhsiiyey Hadhwanaagnews ayaa sidoo kale fariin u diray xisbiga kulmiye iyo xukuumadiisaba.
War murtiyeedkaas ayaa u dhignaa sidan “ Anaga oo ah dhalinyarada beelaha Guulane(Arab) ee deegaanka Balli-gubadle ee caasimada gobolka Hawd,waxaanu si buuxda u taageersanahay is casilaadii siyaasi Cabdilaahi Jawaan anaga oo aaminsan inuu is casilaadiisa ku soo beegay wakhtigii rasmiga ah ee loo baahnaa.
Cabdilaahi Jawaan sumcad xumo ayey u ahaan lahayd haddii uu ka sii tirsanaan lahaa
xukuumada kulmiye ee ku fashilantay hogaamintii dalka iyo wax ka qabashada maamul xumada, musuq maasuqa iyo kala dambayn la,aanta ka jirta dalka.
Wasiirka madaxtooyadana Maxamuud Xaashi Cabdi waxaanu isaga ku eedaynaynaa inuu baabiiyey nidaamkii dawladnimo iyo kala dambayneed ee dalka ka jiray isaga oo xukuumadii umada kaligii jeebka ku sita.”
Sidoo kale dhalinyaradu waxay fariin u direen xisbiga Kulmiye, waxaanay war murtiyeedkooda ku yidhaahdeen sidan “ waxaanu ku war gelinaynaa gudoomiyaha ahna murashaxa xisbiga Kulmiye inaanay wax taageero ahi u oolin magaalada Balli-gubadle ee caasimada gobolka Hawd, waxaanan cadaynaynaa inaanu codkayaga ku taageeri doono xisbiga mucaaridka ah ee Waddani.”
Dr. Ilyaar Jibriil Aadan Af-hayeenka Dhalinyarada Aqoonyahanka Balli-gubadle